Home Somali News Somaliland: Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Oo Ka Hadlay Kormeerkiisii u Horeeyay Ee Maxkamadaha
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Jamhuuriyadda Somaliland Aadan Xaaji Cali, ayaa sheegay in loo baahan yahay in hoos loo daadejiyo adeegyadda maxkamaddaha si culayska looga qaado maxkamadaha qaarkood.
Guddoomiyuhu waxa uu sidaas ka sheegay ka dib markii uu khamiistii kormeerkiisii ugu horeeyay ku soo maray qaar ka mid ah laamaha maxkamadda degmadda Hargeysi ka furatay degmooyinka magaaladda qaarkood.
.Guddoomiye Aadan Xaaji Cali oo ka hadlay kormeerkan ay ku soo maray a Maxkamadda Degmooyinka Hargeysa aya sheegay ina uu xog ogaal u noqonayay caqabadaha ka hor yimi waaxyahan hoos yimaada Maxkamadda Degmadda waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay in maxkamaddaha hoos loo daadejiyo.
“Waxaannu doonaynay in aanu xog ogaal u noqono caqabadihii ka hor yimid aanu aragno maxkamadaha waaxaha magaaladda ku yaallaa. Waxaan doonaynaa inaanu wax ka baranno annagoo ka fikirayna mustaqbalka in qeybo kale oo ka mid ah garsoorka la daadejiyo oo heer degmo la gaadhsiiyo. Markaa intaan tallaabo la qaadin waa inaad ogaataa wixii hore ee la u noqoto bal wixii hore in la daadejiyay halkuu dambeeyay iyo caqabado ah ee jira,”ayuu yidhi Guddoomiyaha Maxkamadda sare.
Guddoomiye Aadan Xaaji Cali waxa uu ku dooday in laamaha maxkamadda degmaddu ka furatay degmooyinka caasimaddu ay qabteen wax-qabad weyn oo culays ka qaaday maxkamadii degmadda, isagoo arrintaas ka hadlayayna waxa uu yidhi “Waxaa aanu soo marnay afar waaxood oo maxkamadda degmadda ah oo wax-qabad weyn haya, maxkamadda degmaddana culays weyn ayay ka qaadeen ta ugu weyn ayaa boqol dacwadood lix bilood soo galaan. Kuwaasi oo iskugu jira madaniya ama qoys ah iyo dacwadaha ay awooda u leeyihiin inay qaadaan. Waanay ku guulaysteen wax racfaan ahna lagama qaadan dadkuna aad ayay ugu farxeen.”
Aadan Xaaji Cali
Shaxda Rasmiga Ah Ee Real Madrid v Eibar – Tababare Zidane Oo Ku Soo Bilaabay Isco Iyo BBC Oo Weli Wadajira.
Al-Shabaab oo dad badan ka qafaalay tuulooyin ka tirsan gobolka Baay
Somaliland: “Dadkiina Meesha Fadhiyaa Wada Mas’uuliyiin Ayaad Tihiine Inaad Aakhiradiina U Tudhaan Oo Dalka U Shaqaysaan Ayaa Loo Baahan Yahay”
Somaliland: Soo Laabshada Cali Khaliif Iyo Wada-Hadaladii Somaliland Iyo Maamulka Khaatumo Bartay Ku ,,,,
Internet la’aan kale oo soo wajahday Waqooyiga Kuuriya